Izindaba - Okufanele ukwenze uma kunenkinga nge-engine cylinder head gasket
Okufanele ukwenze uma kunenkinga nge-engine cylinder head gasket
Lapho i-cylinder head gasket ilimele noma ingavaliwe ngokuqinile, injini ayikwazi ukusebenza ngokujwayelekile futhi kufanele ishintshwe ngokushesha. Izinyathelo ezithile zimi kanje:
1. Susa ikhava ye-valve negasket.
2. Susa umhlangano wengalo ye-valve bese ukhipha induku ye-valve.
3. Khulula kancane kancane futhi ususe imishudo yekhanda lesilinda ngezinyathelo ezintathu ngokulandelana okuhambisanayo ukusuka emaceleni womabili kuye phakathi, bese ususa ikhanda lesilinda negasket.
4. Susa izinto zokubhola ebusweni obuhlangene be-cylinder block nekhanda lesilinda.
5. Guqula uhlangothi olubushelelezi noma uhlangothi olubanzi lwe-cylinder gasket olusha lubheke ebhlokweni lesilinda. Okuphambene kuyiqiniso ngamabhulokhi e-cast iron silinda namakhanda e-aluminium cylinder.
6. Lapho ufaka ikhanda lesilinda, qala usebenzise amabhawodi wokubeka ukubeka ikhanda lesilinda. Ngemuva kokuthi amanye amabhawodi ekhanda lesilinda eqinisiwe ngesandla, susa imishudo yokuma bese ufaka amabhawodi ekhanda lesilinda.
7. Sebenzisa i-torque wrench ukuze uqinise kancane kancane ku-torque ejwayelekile ngezikhathi ezingama-2-3 ngokulandelana okuphambene nokuqaqa.
8. Faka induku yokucindezela i-valve nomhlangano wengalo ye-valve endaweni yokuqala. Ngemuva kokuhlola nokulungisa imvume ye-valve, faka ikhava ye-gasket ne-valve.
I-Yantai Ishikawa Sealing Technology Co, Ltd. igxile ekukhiqizeni nasekusebenzeni kwamapuleti ahlukahlukene wokufaka uphawu, ama-gaskets, kanye nezihlangu zokushisa. Kuyiphini likasihlalo weChina Friction and Sealing Materials Association kanye nosihlalo we-Multi-cylinder Small Diesel Engine Council we-Internal Combustion Engine Association. Inkulu kunazo zonke eChina Enye yezinkampani ezisebenza ngokukhiqiza imikhiqizo yokuvala uphawu.
Ukuze ujwayele inkambiso yentuthuko yokuvikelwa kwemvelo kwamazwe omhlaba, ipuleti le-non-asbestos gasket kanye nensimbi ye-graphite gasket eqinisiwe ithole amalungelo obunikazi kazwelonke, futhi ipuleti elingewona i-asbestos liye labonwa yi-ejensi yokuhlola enegunya yaseYurophu; imikhiqizo yesihlangu sokushisa ithole amalungelo obunikazi emodeli emibili yokusetshenziswa.